बजारमा कोरनाको औषधि बनेन्, खुर्सानी, लसुन, बेसार, अल्कोहलले कोरोना निको पार्छ भन्ने कुरा गलत ! – Online Nepal
बजारमा कोरनाको औषधि बनेन्, खुर्सानी, लसुन, बेसार, अल्कोहलले कोरोना निको पार्छ भन्ने कुरा गलत !
March 11, 2020 245
नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण आजको मितिसम्म छैन । चीनको उहान प्रान्तबाट आएका एक नेपालीमा देखिएको कोरोना निको भइसकेको छ । मुलुकको सीमा जोडिएको देशमा कोभिड–१९ फैलिएकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जोखिम देशको सूचीमा नेपाललाई पनि राखेको छ । त्यसैले अहिले सरकारले सम्भावित जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्दै निगरानी बढाइरहेको छ । विश्वमै यसको औषधि पत्ता लागेको छैन ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयो, “रोग लागेर एकजना म’र्छ भने गलत सूचनाले दुईजना म’र्न सक्छ, गलत सूचनाले सामाजिक मनोविज्ञानमा पार्ने असर झन् कति ठूलो होला, यसतर्फ हामी सबै सचेत हुनुपर्छ ।” सूचना नपाउँदा पनि समस्या हुन्छ भन्नेमा सरकार सतर्क रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कोरोनाको मुख्य लक्ष्यण भनेको ज्वरो, सुक्खा खोकी र श्वासप्रश्वास समस्या हुनु हो । यो रोग दुई दिनको बच्चादेखि १०० वर्षको मानिसमा समेत देखिएको छ । अन्य रोगको सङ्क्रमण भएका वृद्धवृद्धामा मृत्युदर बढी छ । अन्य रोगभन्दा सङ्क्रमणदर बढी र ‘मृ”त्यु’दर कम भएको रोग कोभिड–१९ हो । दश वर्षभन्दा तलकामा ‘मृ”त्यु’दर नभएको जनाइएको छ । नेपालको जस्तै वातावरण भएको देशमा समेत देखिएकाले मुलुकमा पनि आउन सक्ने सम्भावना रहेकाले पहिले त आफैँ सावधानी अपनाउन जरुरी रहेको चिकित्सकले बताएका छन् ।
चीनमा हालै १७ हजार १८५ बिरामीमा गरिएको एक अध्ययनमा ८२ प्रतिशत सामान्य लक्षण, १५ प्रतिशतमा कडा र तीन प्रतिशतमा मात्रै जटिल खालको कोरोना सङ्क्रमण भएको पत्ता लागेको थियो । सङ्क्रमणदर धेरै भए पनि जटिल सङ्क्रमण भने न्यून हुने उक्त अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । कोरोना भाइरस वातावरणमा लामो समय न’बाँच्ने र पानीबाट पनि नआउने चिकित्सकले बताएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार हालसम्म विश्वका ११३ देशमा एक लाख १८ हजारमा रोगको सङ्क्रमण भएको छ । चार हजार २९० को ‘मृ”त्यु भएको छ । बिरामीमध्ये ६६ हजारभन्दा बढी उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् ।
Prevबाबु-छोरा पाइलट, आमा एयरहोस्टेज बाबु-आमा-छोराको उडान त्यो उडान !
Nextयस्तो अबस्थामा भेटिए बिर अमरसिंह थापाको ७ औ पुस्ताको सन्तान
काठमाडौ उपत्यका बासिहरुलाई आयो अत्यन्तै दु:खद खबर
घर भित्र बाढी पसेपछि यी पति पत्नीले गरे कसैले सोच्नै नसक्ने यस्तो हर्कत (भाइरल भिडियो)
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो)